प्रतिभाशाली विद्यार्थी बन्नुहोस् । | Nepalibiz.com.np ( nepali online directory and news portal site )
प्रतिभाशाली विद्यार्थी बन्नुहोस् ।
हामीले स्कुल, कलेजमा केही यस्ता विद्यार्थीहरू देखेका हुन्छौ, जसलाई हेर्दा उ भित्र एक किसिमको पावर छ, जसले उसलाई आकर्षक बनाई रहेको छ जस्तो लाग्छ । सबै जना सर मिसहरुको प्रिय हुनु, कम्पीटिशन जित्नु र स्कुल तथा कलेजमा टप गर्नु यस्ता विद्यार्थीहरूको परिचय हुन्छ । हरेक स्कुलमा यस्ता विद्यार्थीहरूको कमी हुँदैन । आखिर तिनीहरुमा यस्तो के हुन्छ, जुन अरू विद्यार्थीमा हुँदैन , जानी राखौ ।
प्रायः स्कुल कलेजमा केही विद्यार्थीहरू यस्ता हुनछन् , जो धेरै भन्दा धेरै समय मस्ती गरेरै बिताउछन् । उनीहरूले आमाबुबाको सपना चकनाचुर पार्नुका साथै आफ्नो भविष्य पनि बिगारी रहेका हुन्छन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरू स्कुल, कलेज सकिए पछि चैँ निकै पछुताउछन् र सोच्ने गर्छन् , मैले त्यतिखेर राम्रो सँग पढेको भए ? त्यसैले यदि तपाईँ एउटा प्रतिभाशाली विद्यार्थी बन्न चाहानुहुन्छ भने निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् ।
१. ठुलो लक्ष्य बनाउनुहोस् ः एउटा सफल विद्यार्थी बन्नका लागि पढाई सम्बन्धी एउटा ठुलो लक्ष्य बनाउनुहोस् । यस्तो लक्ष्य नयाँ कक्षाको सुरुवात् मै बनाउनु पर्छ । धेरै जसो विद्यार्थीहरू स्कुल त जान्छन् तर कुनै लक्ष्य लिदैनन् । यसरी कहिले परीक्षा आइ पुग्छ, उनीहरूलाई थाहै हुँदैन र परीक्षाको बेलामा अतालिदै पढ्ने तयारी गर्न थाल्छन् । यस्ता विद्यार्थीलाई म किन स्कुल जादैछु भन्ने नै थाहा हुँदैन । जुन विद्यार्थीलाई आफू किन स्कुल जादैछु भन्ने थाहा हुन्छ, उनीहरू नै क्लासमा अब्बल हुन्छन् । त्यसैले यदि तपाईँ एउटा असल विद्यार्थी बन्न चाहनुहुन्छ भने पढाई सम्बन्धी ठुलो लक्ष्य बनाउनुहोस् , जुन क्लासमा कसैले बनाएको छैन । जब तपाईँ कुनै लक्ष्य बनाउनु हुन्छ , त्यो पाउन मेहनत गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यही मेहनतले लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्धत गर्छ । तपाईँको लक्ष्य तपाईँको क्षमता अनुसार ९० प्रतिशत, ८५ प्रतिशत, ८० प्रतिशत अंक ल्याउनु जे पनि हुन सक्छ । तपाईँले लक्ष्य बनाउना साथ तपाईँ अरू भन्दा फरक बन्नुहुनेछ ।
२. अनुशासित रहनुहोस् ः हामीलाई सानै देखि अनुशासनमा बस्न सिकाइन्छ । चाहे त्यो घर होस् वा स्कुल । तर कमै विद्यार्थीले मात्र सही अर्थमा अनुशासनको पालना गर्ने गर्छन् । अनुशासन हाम्रो विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर हामी अनुशासित हुनुलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको हनन हुन पुगेको महसुस गर्छौ । एउटा सफल विद्यार्थी अनुशासित हुन्छ ,त्यसैले घरमा रहदा तथा स्कुलमा भएको बेला त्यहाँको नियमलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्छ ।
३. सकारात्मक सोच्नुहोस् ः सकारात्मक सोच हरेक व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । झन् एउटा विद्यार्थीका लागि सकारात्मक सोच अनिवार्य हुन जान्छ । सकारात्मक सोच्नु र सकारात्मक रहनुले हामीलाई तनाव तथा समस्याबाट टाढा राख्छ । नकारात्मक सोच्दा हाम्रो मन र मस्तिष्क पनि नकारात्मक हुन पुग्छ । नकारात्मक व्यक्तिले कुनै कामको समाधान पनि नकारात्मक तरीकाले नै गर्छ, जसको परिणाम राम्रो हुँदैन । त्यसैले आफ्नो पढाई प्रति र आफू प्रति एउटा विद्यार्थीको मन सधैँ सकारात्मक हुनु पर्छ । सकारात्मक रहनु सजिलो छैन किनकि नकारात्मक व्यक्ति र परिस्थिति बारम्बार हाम्रो जीवनमा आउने गर्छन् । त्यसैले हरेक परिस्थितिमा नआतिई सकारात्मक भई आफ्नो पढाइमा ध्यान दिनुहोस् ।
४. नियमित अध्ययन गर्नुहोस् ः एउटा विद्यार्थीका लागि पढाई भन्दा महत्त्वपूर्ण काम अरू केही हुँदैन । त्यसैले पढाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । तपाईँ आफ्नो स्कुल वा कलेज लाइफमा जे सिक्नु हुन्छ, त्यो तपाईँको व्यक्तित्व बन्न पुग्छ । कक्षामा अब्बल भई तपाईँले आफ्ना अभिभावकलाई अमूल्य उपहार दिन सक्नु हुन्छ । यो त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ ,जब तपाईँ नियमित रूपमा पढ्नुहुन्छ । हरेक दिन अलि अलि गर्दै नियमित रूपमा पढ्ने बानीले पढाइमा सफल बनाउनेछ ।
५. नयाँ कुरा सिकीरहनुहोस् ः आजको समय टेक्नोलोजीको हो । हरेक दिन नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा हामीले नयाँ कुरा सिक्नु अनिवार्य बन्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याई राम्रा आदतहरु अपनाउदै जानु पर्छ । राम्रा आदतका लागि राम्रो पुस्तक पढ्ने, प्रसिद्ध व्यक्तिको जीवनी पढ्ने तथा नयाँ कुराहरू सिकी रहनु पर्छ । सिक्ने यस्तो आदतले पहिला तपाईँलाई सुधार्ने छ र पछि तपाईँको भविष्यलाई अझ राम्रो बनाउदै लानेछ ।
६. आफैलाई पे्ररित गर्नुहोस् ः पढाइमा एकाग्रताका लागि आफूलाई प्रेरित गर्नु अनिवार्य हुन्छ । हरेक दिन शिक्षक, अभिभावकले पढ भनेर भन्नु भन्दा आफैले आफूलाई पढ्न प्रेरित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी पढ्दा अझ राम्रो तरिकाले पढ्न सकिन्छ ।
७ समयको सदुपयोग ः संसारमा सतरी प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरू त्यस्ता छन् , जो आफ्नो समय त्यसै बर्बाद गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूलाई समयको मूल्य नै थाहा हुँदैन । समय नै त्यस्तो वस्तु हो, जसले सफलता दिलाउन सक्छ र असफलता पनि । कुनै पनि कुरामा सफल हुनका लागि सही तरिकाले समय प्रबंधन गर्न जान्नु पर्छ । यदि हामीलाई ठुलो सफलता चाहिएको छ भने समयलाई एउटा हतियार बनाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्छ । एउटा औसत विद्यार्थी र अब्बल विद्यार्थीमा समयको प्रयोग गर्ने तरिकामा फरक हुन्छ । अब्बल विद्यार्थीले समयको महत्त्व बुझी सधैँ समय खेर नफाली पढ्छ भने औसात विद्यार्थीले बहुमूल्य समय खेर फाली पढ्ने अवसर गुमाउने गर्छन् र परीक्षाको बेलामा हतास बन्न पुग्छन् ।
८. राम्रो सङ्गत ः एउटा अब्बल विद्यार्थीको साथीहरू पनि असल नै हुन्छन् । तपाईँ कस्तो विद्यार्थी हो, त्यो तपाईँको सङ्गतले नै बताउने गर्छ । त्यसैले सधैँ असल र होसियार साथीहरू सँग नै मित्रता गर्नुहोस् । तपाईँ जस्तो सङ्गतमा पर्नुहुन्छ, त्यस्तै बन्नु हुनेछ । त्यसैले आफूलाई कक्षाका अब्बल विद्यार्थीको सङ्गतमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
९. रोल मोडल बनाउनुहोस् ः प्रायः सफल त्यही व्यक्ति हुन्छ, जसलाई गाइड गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने कुनै व्यक्ति हुन्छ जस्तै गुरु, अभिभावक, साथी, दिदी, दाजु वा कुनै प्रसिद्ध व्यक्ति आदि । कुनै सफल व्यक्तिलाई आफ्नो गाइड मानी उसको हरेक कुरालाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस् । यसबाट पनि पढाइमा सफल हुन मद्धत मिल्नेछ ।